Ole Gunnar Solskjaer: 'Paul Pogba haatan kuma faraxsana kooxda Man United' | | Ciyaaro
HomeHoryaalka EnglandOle Gunnar Solskjaer: ‘Paul Pogba haatan kuma faraxsana kooxda Man United’
Ole Gunnar Solskjaer: ‘Paul Pogba haatan kuma faraxsana kooxda Man United’
November 21, 2020 Horyaalka England, Wararka Maanta 0
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa qirtay in Paul Pogba uusan haatan ku faraxsaneyn Old Trafford sababo la xiriira halganka uu ugu jiro qaab ciyaareedkiisa.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaan hada si toos ah u dooran kooxda 20-jeer hanatay horyaalka Ingariiska, iyadoo ay ku adkaatay inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa bilowgii xilli ciyaareedkii 2020-21.
Waxaa jiray talo soo jeedin ku saabsan in uu raadinayo inuu burburiyo qandaraaska uu kula joogo United ka hor inta uusan si bilaash ah uga tagin xagaaga 2022, Solskjaer ayaa qirtay in 27 jirkaan uusan haatan ku qanacsaneyn heerka naadiga.
“Waxaan kala hadlay Paul maanta arintaas. Dabcan ma uusan faraxsanayn markii uusan ciyaareynin, iyo inuusan sifiican u ciyaareynin,” The Mirror ayaa kasoo xigatay Solskjaer. Kuma faraxsanayn qaab ciyaareedkiisa. Wuxuu ka ciyaarayaa isla booskiisa France wuuna inoo qabtaa, marka taasi ma ahan xaalad ka duwan tii hore.
Pogba ayaa weli la rumeysan yahay inuu diirada u saaran yahay kooxaha Juventus iyo Real Madrid .
Chelsea oo guul ka gaartay Newcastle United lana wareegtay Hogaanka
Man United oo dooneysa in ay dib ugu soo celisa Eriksen horyaalka Premier League iyo dhowr koox oo kula tartamaa.